कसरी विन्डोज मा फाइल र फोल्डर सम्पीडन सक्षम गर्ने मोबाइल फोरम
डेनियल टेरासा | 21/09/2021 12:09 | इन्टरनेट
अन्त सक्षम पारेर पछि लाग्यो फाइल र फोल्डर कम्प्रेसन हाम्रो कम्प्युटर मा अधिक ठाउँ छ यसको आकार घटाउनु छ। यो एक साँच्चै चाखलाग्दो समाधान हो, यो लागू गर्दा यो सामग्री वा फाइल को संरचना लाई प्रभावित गर्दैन। त्यहाँ कुनै ब्यापार बन्द छैन, उनीहरुले कब्जा गरेको ठाउँ मात्र कम छ।
यो विषय हो कि हामी यस पोष्ट मा छलफल गर्न जाँदैछौं। सबै भन्दा राम्रो तरीकाले यो अपरेशन गर्न को लागी र फाइदाहरु को आनन्द ले यो हामीलाई प्रदान गर्दछ। तर यो मुद्दा मा जानु भन्दा पहिले, आश्चर्य छ कि यो आवश्यक छ वा फाइल र फोल्डर सम्पीडन सक्षम गर्न को लागी उपयुक्त छ हाम्रो डिस्क ड्राइव मा।
1 जब फाइल र फोल्डर कम्प्रेशन सक्षम गर्ने?
2 NTFS फाइल सression्कुचन
2.1 फाइल र फोल्डर कम्प्रेशन कसरी सक्षम गर्ने?
2.2 फाइल र फोल्डर कम्प्रेशन कसरी असक्षम गर्ने?
3 फाइल सम्पीडन असक्षम गर्न समूह नीति सम्पादक को उपयोग गर्नुहोस्
जब फाइल र फोल्डर कम्प्रेशन सक्षम गर्ने?
जे होस् सामान्य मा यो सधैं एक सिफारिश कार्य हो, यो विशेष गरी निम्न मामलाहरु मा फाइलहरु कम्प्रेस गर्न को लागी सिफारिश गरीएको छ:
जब त्यहाँ एक ठाउँ बचाउन आवश्यक छ हाम्रो पीसी मा। यदि त्यसो हो भने, यो सबैभन्दा ठूलो फाइलहरु वा कम्तीमा पहिले प्रयोग गरीन्छ कि ती कम्प्रेस गर्न को लागी सिफारिश गरीन्छ।
भएको अवस्थामा ईमेल द्वारा धेरै फाइलहरु पठाउनुहोस्। धेरै ठूला फाइलहरु लोड गर्न सकिदैन।
दुबै व्यक्तिगत फाइलहरु र फोल्डरहरु संकुचित गर्न सकिन्छ। पछिल्लो मामला मा, सम्पीडन सबै फाइलहरु र subfolders उनीहरु लाई समान रूप मा लागू गरीन्छ।
जब तपाइँ एक कम्प्रेस गर्नुहुन्छ कार्पेट, एक नयाँ संकुचित फोल्डर (यो एक .zip, .rar वा अन्य विस्तार हुन सक्छ) स्वतः मूल फोल्डर को रूप मा एकै स्थान मा प्रकट हुन्छ। यी दुई फाइलहरु, मूल फाइल र संकुचित फाइल, बिल्कुल स्वतन्त्र छन्।
यद्यपि यो याद गर्नुपर्दछ सबै फाइलहरु एउटै स्तरमा संकुचित छैनन्। वास्तव मा, त्यहाँ एक फाइल को आकार मा कमी को फरक "डिग्री" छन्, यसको सामग्री मा निर्भर गर्दछ। उदाहरण को लागी: पाठ फाइलहरु छवि फाइलहरु भन्दा धेरै संकुचित छन्।
NTFS फाइल सression्कुचन
यदि हामी विन्डोज अपरेटि system्ग सिस्टम संग काम गर्छौं, हामी यो कार्य को यस प्रकार को प्रदर्शन गर्न को लागी एक धेरै राम्रो उपकरण छ: फाइल प्रणाली नयाँ टेक्नोलोजी फाइल सिस्टम NTFS)।
विन्डोज १० मा, यो प्रणाली एक समावेश गर्दछ हल्का कम्प्रेसन प्रकार्य विशेष गरी फाइल आकार घटाउन को लागी डिजाइन गरीएको हो। यस प्रकार्य को ठूलो लाभ यो हो कि, कम्प्यूटर मा धेरै ठाउँ को बचत को अतिरिक्त, यो म्यानुअल डिकम्प्रेशन को सहारा बिना फाइलहरु को लागी पहुँच को अनुमति दिन्छ।
को फ्यानहरू NTFS सम्पीडन को धेरै र धेरै उल्लेखनीय छन्। सबै भन्दा पहिले, यो ठाउँ खाली गर्न को लागी एक प्रभावी समाधान हो। अर्कोतर्फ, यो हामीलाई अनुमति दिन्छ एक एकाइ कन्फिगर गर्न को लागी ती फाइलहरु लाई स्टोर गर्न को लागी हामी मात्र विरलै प्रयोग गर्दछौं।
सबै कुराको बावजुद, त्यहाँ केहि पनि छन् असुविधा। यो ध्यान दिनुपर्छ कि NTFS सम्पीडन सक्षम हाम्रो उपकरणहरु को प्रदर्शन लाई प्रभावित गर्न सक्छ। यो हुन्छ, अन्य चीजहरु को बीच मा, किनभने फाइलहरु डिकम्प्रेस र फेरि संकुचित प्रत्येक पटक हामी उनीहरुलाई पहुँच छ। र यो एक धेरै संसाधन उपभोग गर्ने प्रक्रिया हो।
फाइल र फोल्डर कम्प्रेशन कसरी सक्षम गर्ने?
फाइलहरु र फोल्डरहरु मा कम्प्रेस गर्न को लागी सरल र सबैभन्दा सीधा तरीका विन्डोज 10 प्रयोग गर्दैछ फाइल ब्राउजर। सम्पीडन व्यक्तिगत फाइलहरु, फोल्डरहरु, र एक सम्पूर्ण ड्राइव मा गर्न सकिन्छ। प्रक्रिया छिटो छ र यो जस्तै चल्छ:
सबै भन्दा पहिले, तपाइँ दायाँ क्लिक गर्नुहोस् फोल्डर वा फाइल जसमा तपाइँ कार्य गर्न चाहानुहुन्छ।
हामी यसको विकल्प चयन गर्दछौं «गुणहरू».
त्यहाँ, ट्याबमा "सामान्य", हामी चयन गर्दछौं "उन्नत" उन्नत विशेषताहरु पहुँच गर्न।
यो महत्वपूर्ण कदम हो: मा "कम्प्रेस" वा "एन्क्रिप्ट विशेषताहरु" हामी को विकल्प चिन्ह लगाउँछौं "डिस्क स्पेस बचाउन सामग्री कम्प्रेस गर्नुहोस्".
प्रमाणित गर्न, क्लिक गर्नुहोस् "ठिक छ" र पछि "निवेदन गर्नु"।
फाइल र फोल्डर सression्कुचन सक्षम गर्न को लागी अर्को तरीका कमाण्ड प्रम्प्ट को माध्यम बाट हो, आदेश को उपयोग गरेर संकुचित। यो कसरी यो गर्न को लागी हो:
हामी फोल्डरमा जान्छौं कि हामी कम्प्रेस गर्न चाहन्छौं, थिच्नुहोस् Shift + Control + Right बटन, को विकल्प चयन गर्न "यहाँ आदेश सञ्झ्याल खोल्नुहोस्".
हामी कार्य गर्न को लागी सम्बन्धित कमांड प्रविष्ट गर्दछौं जुन हामी गर्न चाहन्छौं:
एकल फाइल कम्प्रेस गर्न: फाइल नाम कम्प्याक्ट / सी
यसको सट्टा, फोल्डर मा सबै फाइलहरु लाई हामी कम्प्रेस गर्न को लागी: filename कम्प्याक्ट / सी *।
र फाइलहरु र एक फोल्डर को subfolders संकुचित गर्न: फाइल नाम कम्प्याक्ट / सी / एस।
फाइल र फोल्डर कम्प्रेशन कसरी असक्षम गर्ने?
विपरित कार्य गर्न को लागी, त्यो हो, विन्डोज मा फाइल कम्प्रेशन असक्षम गर्नुहोस्, हामी मात्र सक्षम गर्न को लागी उस्तै चरणहरु निष्पादित गर्नेछौं, तर हामीले पहिले चिन्ह लगाएको विकल्प अनचेक गर्दै:
फेरि हामी फोल्डर वा फाइल जसमा हामी कार्य गर्न चाहन्छौं मा दायाँ बटन संग क्लिक गर्नुहोस्।
अर्को हामी को विकल्प मा जानुहोस् «गुणहरू».
हामी ट्याब खोज्छौं "सामान्य", जसमा हामी छान्छौं "उन्नत" क्रम मा उन्नत गुणहरु को उपयोग गर्न को लागी सक्षम हुन।
फरक यो चरण मा छ: जब हामी मा छौं "कम्प्रेस" वा "एन्क्रिप्ट विशेषताहरु" हामी विकल्प अनचेक गर्नुहोस् "डिस्क स्पेस बचाउन सामग्री कम्प्रेस गर्नुहोस्".
अन्तमा हामी पहिलो थिचेर प्रक्रिया मान्य हुनेछ "ठिक छ" र पछि "निवेदन गर्नु"।
यहाँ विधिहरु NTFS सम्पीडन र decompression सुविधा को उपयोग गर्न को लागी छन्। तर हामी अझै पनी हाम्रो कम्प्यूटर मा यस प्रकार को कार्यहरु को एक कडा नियन्त्रण गर्न को लागी विश्लेषण गर्न को लागी अर्को उपकरण छ।
फाइल सम्पीडन असक्षम गर्न समूह नीति सम्पादक को उपयोग गर्नुहोस्
यो सब भन्दा छिटो तरीका हो यदि हामी के चाहन्छौं Windows 10 लाई अनुमति बिना हाम्रो कम्प्यूटर मा फाइलहरु कम्प्रेस गर्न बाट रोक्न को लागी: NTFS फाइलहरु को संपीडन को उपयोग गरी अक्षम गर्नुहोस्। समूह नीति सम्पादक।
यो एक आन्तरिक उपकरण हो कि माइक्रोसफ्ट को अपरेटि systems सिस्टम छ। यो सम्पादकले हामीलाई कसरत गर्न अनुमति दिन्छ हाम्रो पीसी को संचालन मा अधिक नियन्त्रण र यसले हामीलाई केहि समायोजन गर्न को लागी क्षमता प्रदान गर्दछ जुन कन्ट्रोल प्यानल वा सामान्य प्रणाली सेटिंग्स मा उपलब्ध छैन।
यी समूह नीति सम्पादक संग NTFS फाइल सression्कुचन असक्षम गर्न को लागी पालन गर्न को लागी चरणहरु छन्:
हामी कुञ्जीहरू थिच्दछौं विन्डोज + आर खोल्न को लागी संवाद बक्स चलाउनुहोस्.
बक्स मा हामी लेख्छौं एमएससी र क्लिक गर्नुहोस् «प्रविष्ट गर्नुहोस्».
एक पटक समूह नीति सम्पादक हामी निम्न विकल्प मार्ग चयन: कम्प्यूटर कन्फिगरेसन> प्रशासनिक टेम्पलेट्स> प्रणाली> फाइल प्रणाली> NTFS।
तल खुल्ने विकल्पहरु बाट, हामी छनौट गर्दछौं "सबै NTFS भोल्युममा सम्पीडन अनुमति नदिनुहोस्"। त्यहाँ हामी क्लिक गर्छौं "सक्षम" र बटन संग पुष्टि गर्नुहोस् "निवेदन गर्नु"।
विपरीत कार्य गर्न को लागी, कि, सम्पीडन सक्षम छ, बस यी उहि चरणहरु को पालना गर्नुहोस् र चरण4मा "सक्षम" को सट्टा "असक्षम" चयन गर्नुहोस्।
कुनैपनि अवस्थामा, परिवर्तन को लागी प्रभाव को लागी हामी हाम्रो कम्प्यूटर पुन: सुरु गर्नु पर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » इन्टरनेट » कसरी विन्डोज मा फाइल र फोल्डर सम्पीडन सक्षम गर्ने